Twin Seoul endri-javatra (tarehiny sy ny anatiny ambonin'ny) sy ny fomba hahitana?
トップページ ＞ 言語 ＞ マラガシ語 ＞ Twin Seoul endri-javatra (tarehiny sy ny anatiny ambonin'ny) sy ny fomba hahitana?
mahazo kambana Seoul [3500 Yen Free fanombanana] amin'ny hoavy dia toetra izay tany am-boalohany izay iray ny fanahy dia mizara roa, dia izay dia azo lazaina, toy ny antsasaky ny tena. Tsy fahita firy ny hihaona izany kambana fanahy, fa raha afaka mihaona raha, dia nanafika ny fihetseham-po avy amin'ny firenena hafa izany fotoana.
Ary raha mba hanohy ny fifandraisana amin'ny antoko hafa, izay no handeha hanandrana ny tsy mahatsapa teo aloha. Raha kambana ary Seoul koa ny ampahany amin'ny synchro sy ny amin'ny miseho sy ny faritra anatiny, dia misy ihany koa ny ampahany hafa tanteraka. Raha maika ny
ireo endri-javatra, olona nihaona izao kambana Ikeru Seoul Amin'izay dia nandroso ny dingana ho an'ny fanahy ho iray miaraka, ny olona hitsena manomboka izao ho mora kokoa ny mahita ny fisiany Xiang.
kambana fanahin'ny endri-javatra sy ny fomba hahitana, ny fandraisana ho mpikambana ao
fomba Ka inona no endri-javatra sy ny fomba hahitana hita ao amin'ny kambana fanahy. Koa satria
kambana fanahy izay nanintona mafy ny fony izy nihaona tamin'i
? dia tany am-boalohany ny mitovy, ary samy izy no mafy tian'ny rehefa nihaona voalohany. Izany dia fahatsapana toy ny raiki-pitia izy, fa azo ekena ho toy ny tena ilaina fanatrehany ao tenako tsy tia fotsiny.
2 ny olona
? synchro tahan'ny dia avo
kambana Seoul, dia tena matetika ny fitondran-tena sy fisainana mba synchro ny iray am-boalohany. Na sendra nihazakazaka ho any, rehefa mieritreritra ny antoko hafa, na dia ny dian'ny ny sakafo sy ny resaka dia mitovy, toy ny hoe na mieritreritra zavatra mitovy tamin'izany andro izany, tsy mampino synchro hitranga aorian'ny iray hafa.
? toetra kambana olona izay fantatrao ny mifanohitra matetika
1 tokana fanahy, toetra dia ny manana mafy idina izay tsy mitovy, raha ny marina dia dia matetika no mifanohitra. ihany Koa avy amin'ny efa lehibe ihany koa ny tontolo iainana, misy tsy mifanaraka ihany koa ny faritra. Na izany aza, dia iray amin'ireo endri-javatra azo hanaiky ny hafahafa izany na dia amin'ny ampahany.
kambana fanahy, indraindray mba Mandositra ny fotoana, fa tia fatratra ny mahafantatra ny tsirairay, ary ny toetra dia tena ny mifanohitra amin'izany, dia mitombo ny fihetseham-po izay tsy te-ho very ny antoko avy amin'ny lasa traikefa ny, dia mety Mandositra ny tsirairay tamin'izany fotoana izany. Koa ho azo atao ny hanandrana izany fanaintainana tsy toy fanahy vady, dia mety ho endri-javatra ny kambana fanahin'ny ny fifandraisana.
? Tsy misy ara-batana tsy midika fa misy maro ny fijery ankapobeny
-mitovy izay mitovy, nefa dia fahita fa ny sasany amin'ireo faritra tena misy toy izany koa. Ohatra, ny tanana sy ny tongotry ny endrika, ny sasany tapaky ny tarehiny, dia tahaka ny tandra na birthmark ny toerana. Ankoatra izany, ianao koa dia afaka raharaha hita fa dia mitovy amin'ny zatra volo.
ihany koa ny teo, fa mila kambana
fanahin'ny endri-javatra handresy zava-tsarotra, dia ho lehibe ny tsipiriany raha mba mahita izany olona izany. Ny fifandraisana misy eo amin'ny olona koa ireo toetra mampanaintaina fa tamin'izany fotoana izany, fa zava-dehibe ny mahazo ny tsirairay ho entina ho any tsirairay aterak'izany.
Zava-mahazatra fa ny sasany amin'ireo faritra tena misy toy izany koa. Ohatra, ny tanana sy ny tongotry ny endrika, ny sasany tapaky ny tarehiny, dia tahaka ny tandra na birthmark ny toerana. Ankoatra izany, ianao koa dia afaka raharaha hita fa dia mitovy amin'ny zatra volo.